Home Wararka Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Gobolada Bay & Bakool oo baxaya, loona...
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Gobolada Bay & Bakool oo baxaya, loona daad gureynayo Tigray
Waxaa ka bilaawday deegaano ka tirsan Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed daad guraynta iyo dib u celinta lagu sameeynayo ciidamada Itoobiya ee ka baxsan AMISOM ee ku sugan degaano ka tirsan Dowlada Goboledk Koonfur Galbeed.
Ciidamada Itoobiya ee ka baxsan xeendaabka AMISOM ee kusgan Soomaaliya ayaa lagu sheegaya ainta u dhaxeeysa 5-7 Kun oo qof kuwaas oo sheegta inay qeyb ka yihiin ciidamada Nabad Ilaalinta AMISOM.
Inkastaa oo uu Abiy Axmad Jeclaan lahaa in uu difaaco danaha Farmaajo, kuna hayo ciidankaas gudaha dalka Soomaaliya, hadana waxa culays xoog leh kala soo darsay ciidamada Tigray oo gacanta ku dhigay qaybo badan oo ka mida dalka Itoobiya. Taas ayaana sababtay in uu si deg deg ah uu ciidankiisa ugala baxo dalka Soomaaliya. Ilaa iyo hada lama yaqaabo tirada rasmiga ah ee uu Abiy Axmad kala baxayo dalka Soomaaliya.
Bixitaanka ciidankan ay ka baxayaan Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhex abuurtay hogaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed. Walwal iyo cabsi la xiriirta in ururka Al Shabaab uu xoog kula wareegod deegaano ka tirsan Gobolka Bay.